Hacking Tools: GNU / Linux တွင်အသုံးပြုရန်အသုံးဝင်သော Hacking Tools Linux မှ
ထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပမြေားနှင့်အတူဆက်လက် အခင်းအကျင်း Hackingဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အချက်ကိုနည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ် Hacking Tools။ ထိုသို့ပြုရန်အကောင်းဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံးအချို့ကိုသိထားပါ software tools များ ပညာရှင်များ၏လုပ်ငန်းခွင်ဝန်းကျင်အတွက်ဖန်တီးပြီးစိတ် ၀ င်စားသူ «Hack & Pentesting ».
ထို့အပြင်သူကဆိုပါတယ်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် Hacking Tools လေ့ကျင့်သောသူတို့ကusedုံနှစ် ဦး စလုံးအသုံးပြုနိုင်သည် "Ethical Hacking" မကျင့်သောသူတို့အဘို့အဖြစ်။
Ethical Hacking - သင်၏ GNU / Linux Distro အတွက်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော application များ
ဤအခွင့်အလမ်းအတွက်နှင့်အကြောင်းအရာကိုအပြည့်အဝမ ၀ င်မီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောယခင်စာပေများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် Hacking ကို ဘာသာရပ်သို့စူးစမ်းလေ့လာလိုသူများသည်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။
"အဘယ်ကြောင့် GNU / Linux ကိုအပေါ် Hack? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် "Hacking & Pentesting" နယ်ပယ်မှပညာရှင်များသည်သူတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အတွက် GNU / Linux ကို Windows, MacOS သို့မဟုတ်အခြားအရာများထက် GNU / Linux ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်၊ အကြောင်းမှာများစွာသောအရာများအကြား၊ က။ ဒါ့အပြင်သင်၏ Command Line Interface (CLI) ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဘာကြောင့်ဤမျှကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ပြီးပေါင်းစပ်ထားတာလဲ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ terminal သို့မဟုတ် console ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပိုမိုလုံခြုံပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိ၍ ၎င်းသည် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောကြောင့်၊ Windows / MacOS သည်များသောအားဖြင့် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပစ်မှတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။" Ethical Hacking - သင်၏ GNU / Linux Distro အတွက်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော application များ
Hacking နှင့် Pentesting - သင်၏ GNU / Linux Distro ကိုဤ IT နယ်ပယ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့ဟာဟက်ကာတွေလား။
1 Hacking Tools: Linux အတွက်အကောင်းဆုံး Hacking Tools
1.1 Hacking Tool ၁: Metasploit
1.2 Hacking Tool 2: Tool-X ကိုသုံးပါ
1.3 Hacking Tool ၃: Onex
1.4 နောက်ထပ် Hacking Tools 14 ခု
1.5 Hacking Tools နှင့်ပတ်သက်သောအပိုဆောင်းလင့်ခ်များ
Hacking Tools: Linux အတွက်အကောင်းဆုံး Hacking Tools
အကောင်းဆုံးလူသိများ3ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အသုံးပြုခဲ့သည် Hacking Tools သူတို့ကများသောအားဖြင့်အောက်ပါများမှာ:
Hacking ကိရိယာ ၁: ကွမ်းခြံကုန်း
ဒါဟာစဉ်းစားသည် ထိုးဖောက်မှုစမ်းသပ်မူဘောင် အများဆုံးကမ္ဘာမှာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကွမ်းခြံကုန်း အဆိုပါအကြားပူးပေါင်း၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အသိုင်းအဝိုင်း y လျင်မြန်ခြင်း ၇။ ၎င်းသည်လုံခြုံရေးအဖွဲ့များသည်အားနည်းချက်များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ လုံခြုံရေးအကဲဖြတ်ခြင်းများစီမံခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးအသိအမြင်မြှင့်တင်ခြင်းထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ကူညီသည်။ အမြဲတမ်းခြေလှမ်းတစ်လှမ်း (သို့) ၂ ခုဆက်ရှိနေရန်လေ့ကျင့်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ချယူရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အောက်ပါသို့သွားပါ link ကို။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ link ကို.
Hacking ကိရိယာ ၁: Tool-X
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် installer ကို hacking tools မှလာသည် Kali Linux ကို. Tool-X များအတွက်တီထွင်သည် Termux နှင့်အခြား Linux အခြေပြု Operating Systems ။ Tool-X သင်ထက်ပိုထည့်နိုင်သည် 370 hacking tools များ Termux နှင့်အမျိုးမျိုးသော Linux အခြေပြု Distributions အကြောင်း Ubuntu နှင့် Debian တို့ဖြစ်သည်အခြားသူများအကြား။
ဒေါင်းလုပ်ချယူရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အောက်ပါသို့သွားပါ link ကို.
Hacking ကိရိယာ ၁: Onex
၎င်းသည်ဟက်ကာများအတွက်အထုပ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ Onex ကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည့်ဟက်ကာများ ၃၇၀ ကျော်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလင်းနှင့်လျင်မြန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်ဆင်တူသည် Tool-Xဒါကြောင့်အစားကိုသုံးနိုင်သည် Tool-X.
နောက်ထပ် Hacking Tools 14 ခု
အခြားသူတွေနေစဉ် Hacking Tools ဆင်တူသည်နှင့်အသုံးဝင်သကဲ့သို့
လူမှုရေးPenetration Testing Framework နှင့် Hacking Tool Suite ။
GoGhostဖြေ - ကြီးမားတဲ့ SMBGhost browsing အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ open source tool ။
HackingTool ပါဖြေဟက္ကာတွေအတွက် All-In-One Hacking Tool တစ်ခု။
Hacktronian ဖြစ်သည်: Linux နှင့် Android အတွက် All-in-one Hacking Tool တစ်ခုရနိုင်သည်။
ဗေဒင်ဖြေ Linux နဲ့ Termux အတွက်အဆင့်မြင့် phishing ကိရိယာ။
Sigit: ရိုးရှင်းသောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း Toolbox ။
SocialBoxဖြေ - လူမှုရေးကွန်ရက်တွေအတွက် Brute Force attack Framework ။
SQLMapဖြေ - အလိုအလျောက် SQL inject and database takeover tool ။
TEA - Ssh-Client Wormဖြေ - WAS ssh-client ကို TAS framework နဲ့လုပ်ထားတယ်။
TeleGram-Scraperဖြေ Telegram အုပ်စုများမှသုံးစွဲသူများထံမှသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်။
UDork။ အခြားရှာဖွေမှုများမှဖိုင်များသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်များမှအထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များကိုရယူရန် Google search script ။
Web Hacker ရဲ့လက်နက်များWeb Hackers မှအသုံးပြုသော Cool Toolkit ။
Zphisherဖြေ - အလိုအလျောက် phishing ကိရိယာ။
Hacking Tools နှင့်ပတ်သက်သောအပိုဆောင်းလင့်ခ်များ
၏ဤသေးငယ်တဲ့စာရင်းချဲ့ထွင်ရန် Hacking Tools နှင့်အခြားအလားတူသူတွေကို အိုင်တီလုံခြုံရေးများသောအားဖြင့် Cross-platform သို့မဟုတ်များအတွက်ဖြစ်သော Windows နဲ့ Androidအောက်ပါလင့်ခ်များကိုကြည့်နိုင်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အဖြစ်လူသိများအကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဆော့ဝဲ tools တွေအကြောင်းအချို့ «Hacking Tools», အထူးကျွမ်းကျင်သူများရဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖန်တီးနှင့်ပတ်သက်။ အသည်းအသန်နေကြသည် «Hack & Pentesting »; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Hacking Tools: GNU / Linux တွင်အသုံးပြုရန်အသုံးဝင်သော Hacking Tools
အကယ်၍ သင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမသိသော၊ သင်ကသင်တန်းများ၊ လက်စွဲစာအုပ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောချိတ်ဆက်မှုများမချိတ်ဆက်ထားပါက၎င်းသည်အသုံးမ ၀ င်သောကြောင့်အသုံး ၀ င်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် Nosirve ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိမိတို့၏ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်တစ်ခုချင်းစီကိုချဉ်းကပ်ရန်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ရဲ့ကြင်နာအကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" သည် Gnome 40, Wayland နှင့်အခြား app များမှလာသည်